Ny kapoka sy ny tadin'ny borosy ao amin'ny 'sol 23' | Famoronana an-tserasera
Ankoatry ny teôria ny loko sy ny hatsaran-toetra maro hafa izay tsy maintsy ananana, dia mandalo ny fandalinana ireo tompon'ny sary hosodoko fantaro ny volon'ny kapoka sy ny tadinao hahitana fa ny fanipazana diagonaly iray amin'ny alokaloka sasany dia afaka manolotra fahatsapana iray na iray hafa amin'izany halaliny izay tianao homena izany.
Ohatra tsara hahalalana ny maha-zava-dehibe ny tsipika sy ny fomba iray omena tsara miaraka amina felatanana tsara Azonao atao ny mitahiry minitra mitady ny endrika tonga lafatra amin'ny fikarohana fomba hafa hahitana valiny mitovy. 'sol 23' nataon'i Conrad Jon Godly dia ampy ho antsika hahafantatra ny fomba hanomezana endrika tonga lafatra ny tampon'ny tendrombohitra izay matetika ny vinavinan'ny besinimaro iraisana.
Conrad dia mamaritra tsara an'io tendrombohitra io amin'ny fampiasana sary hosodoko menaka be dia be mba hanomezana ny endriny sahaza an'ireo torohevitra sy fiasa ireo. Ny zavatra tokana mety haharitra volana vitsivitsy vao maina ilay menaka. Izany dia nilaza, ho fahalianana milaza fa ny loko menaka sasany dia mila taona maro vao maina tanteraka.
Izy io dia iray amin'ireo fahaiza-manao izay tsy maintsy tratrarina aorian'ny fampiharana palitao menaka, izy io andraso mandra-paha maina tanteraka mampihatra hafa. Ny sasany, ao anatin'ny herinandro dia vonona ny ho afaka hoso-doko indray izy ireo, ny hafa kosa manana roa andro dia mihoatra ny ampy. Na izany na tsy izany, miankina amin'ny diloilo sy ny halavan'ny atiny ny fiandrasana azy ho maina.
Eto ilay mpanao hosodoko mampiasa loko be dia be mba hamokarana izany vokatra izany amin'ny endriny izay manampy amin'ny fanolorana effets optique izay miavaka amin'ny canvas. Manana ny tranonkalanao ianao avy amin'ity rohy ity hidirana amin'ny sisin'ny sary hosodoko izay ilalaovany betsaka amin'ny kapoka sy ny endriny araka ny ahitanao azy.
Mpanao hosodoko hafa milalao amin'ny kapoka izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 'masoandro 23' sy ny filàna mampiasa loko maro